Yintoni Entsha kwi-iOS 15.1 | Iindaba ze-iPhone
UIgnacio Sala | 26/10/2021 10:40 | iOS 15
Njengoko i-Apple ibhengeze kwiveki ephelileyo, uhlaziyo lokuqala olukhulu lwe-iOS 15, iOS 15.1, lukhutshwe izolo emva kwemini (ixesha laseSpain), uhlaziyo olufika kunye. ezinye zeempawu ezilindelekileyo ukuba i-Apple ayikhange ibandakanyile kwinguqulelo yokugqibela yale nguqulo kunye nezinye zazo zifikelele kwi-iPhone 13 entsha.
Ukuba ufuna yazi zonke iindaba esele ikhona nge-iOS 15.1 kunye ne-iPadOS 15.1 emva kokuhlaziya inguqulelo yamva nje esele ikhona, ndikumema ukuba uqhubeke ufunda.
1 Yabelana ngokuDlala
2 IiProRes (iPhone 13 Pro)
3 Macro umsebenzi
4 Uphuculo lolawulo lwebhetri ye-iPhone 12
5 I-HomePod ixhasa iLassless Audio kunye neDolby Atmos
6 App yasekhaya
7 Umbhalo okhoyo kwi-iPad
8 Iindlela ezimfutshane
9 Ikhadi lokugonya kwiWalethi
10 Ukulungisa iibhagi
11 IMacOS 15 Monterey ngoku iyafumaneka
I-SharePlay ngumsebenzi oyilelwe ukuba yenza ukuba abantu basondelelane ngokusondeleyo enkosi kuFaceTime, into ezalwe ngenxa yesidingo sobhubhani we-coronavirus ukugcina ukunxibelelana nabahlobo kunye nosapho.
Olu phawu luvumela abathathi-nxaxheba ukuba bathathe inxaxheba dlala umculo, uthotho kunye neemuvi ngolungelelwaniso baze ngaloo ndlela bagqabaze ngayo ngokungathi babekunye kwigumbi elinye.
Ukongeza, ikwavumela ukwabelana iPhone yakho, iPad okanye Mac screen nomnye umntu, inqaku elifanelekileyo lokucwangcisa uhambo, i-hangout kunye nabahlobo, ukunceda umntu othile ukuseta okanye ukulungisa ingxaki isixhobo sakho.
IiProRes (iPhone 13 Pro)
Ngokuziswa koluhlu lwe-iPhone 13, i-Apple yazisa inketho entsha yevidiyo ebizwa ngokuba yiProRes, a ifomathi yokurekhoda ividiyo isetyenziswa kurekhodisho lobuchwephesha olunikezela ngokuthembeka kombala ophezulu kunye noxinzelelo lwevidiyo esezantsi, iinkcukacha ezincinci kakhulu zilahlekile.
Umsebenzi lo ifumaneka kuphela kwi-iPhone 13 Pro kunye ne-iPhone 13 Pro Max, abasebenzisi abangakwaziyo ukurekhoda kuphela, kodwa bahlele kwaye babelane ngeevidiyo ezenziwe kwizixhobo zabo. Lo msebenzi ufumaneka ngaphakathi kweKhamera - Iifomati - izicwangciso zesicelo seProRes.
Ukuba ufuna irekhodi kwi-4K kwi-30 fps, udinga i-iPhone 13 Pro ye-256 GB okanye ngaphezulu, kuba kwimodeli yokugcina ye-128 GB, lo msebenzi ulinganiselwe kwi-1080 kwi-60 fps. Oku kungenxa yokuba, ngokutsho kwe-Apple, umzuzu omnye wevidiyo kwi-10-bit HDR ProRes ithatha i-1.7 GB kwimodi ye-HD kunye ne-6 GB kwi-4K.
Omnye wemisebenzi emitsha ekhoyo ngekhamera ye-iPhone entsha ene-iOS 15.1 yimacro. Nge-iOS 15.1, i-Apple yongeze iswitshi kuyo khubaza i-auto macro.
Xa ivaliwe, usetyenziso lweKhamera ayizukutshintsha ngokuzenzekelayo kwi-engile ecothayo eWide Wide kwiifoto kunye neevidiyo ezinkulu. Lo msebenzi omtsha uyafumaneka ngaphakathi kwezicwangciso - Ikhamera.
Uphuculo lolawulo lwebhetri ye-iPhone 12
I-iOS 15.1 yazisa i-algorithms entsha ukwazi imeko yebhetri, i-algorithms enikezela uqikelelo olungcono lomthamo webhetri ixesha elide kwi-iPhone 12.
I-HomePod ixhasa iLassless Audio kunye neDolby Atmos
Ayiyiyo kuphela i-iPhone efumene iindaba ezibalulekileyo nge-iOS 15.1, kuba i-HomePod iye yahlaziya isoftware yayo kwi-15.1, Ukongeza i-audio engalahlekiyo kunye nenkxaso yeDolby Atmos ngomsindo wendawo.
Ukwenza lo msebenzi mtsha, kufuneka siwenze ngesicelo saseKhaya.
Yongezwe ezintsha ezizixhobisayo ngokusekelwe ekufundeni ukusuka kwi-HomeKit-ehambelanayo yokukhanyisa, umgangatho womoya okanye inzwa yezinga lokufuma.
Umbhalo okhoyo kwi-iPad
Umsebenzi we ukuqondwa kwesicatshulwa, Umbhalo obukhoma, okhoyo ngekhamera kwi-iPhone, ngoku iyafumaneka kwi-iPadOS 15, into ekuvumela ukuba uqaphele imibhalo, iinombolo zefowuni, iidilesi ...
Olu phawu luyafumaneka kwi-iPads kunye ne Iprosesa ye-A12 Bionic okanye ngaphezulu.
Yongezwe iintshukumo ezintsha esele zicwangcisiwe esivumela ukuba sibeke ngaphezulu umbhalo kwimifanekiso okanye iifayile kwifomathi yeGIF.
Ikhadi lokugonya kwiWalethi
Abasebenzisi abafumene isitofu sokugonya se-COVID-19 banokusebenzisa i-Wallet app ukuze gcina kwaye wenze ikhadi lokugonya enokuthi iboniswe naphi na apho ifunwa khona ngaphandle kokuthwala isiqinisekiso somzimba ephepheni.
Lo msebenzi okwangoku ifumaneka kuphela kwamanye amazwe ase-United States.
Kulungiswe ingxaki ukuba isicelo Iifoto thaca xa bonisa ngokungalunganga ukuba ugcino lwalugcwele xa ungenisa iividiyo kunye neefoto.
Ingxaki eyenzekileyo xa udlala iaudio kwisicelo esinokuthi kunqunyanyiswe xa utshixa isikrini.
Nge-iOS 15.1 nayo iyilungisile ingxaki leyo khange ivumele isixhobo ukuba sibhaqe iinethiwekhi ze-Wi-Fi ezikhoyo.
IMacOS 15 Monterey ngoku iyafumaneka
Kanye kunye nokukhululwa kwe-iOS 15.1, i-Apple yakhupha i Inguqulelo yokugqibela yeMacOS Monterey, inguqulelo entsha eyazisa ezinye zeempawu ezikwafumaneka kwi-iOS njengeSharePlay.
Okwangoku, umsebenzi Ulawulo lwendalo iphela, umsebenzi okuvumela ukuba ukwandise i-monitor ukusuka kwi-Mac ukuya kwi-iPad, ayifumaneki kodwa iya kufika kwiiveki ezizayo, ngokutsho kwe-Apple kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo.
iMacOS Monterey yamkelekile Iindlela ezimfutshane, imowudi yekhonkrithi kunye neSafari ehlaziyiweyo ye-iOS 15. Le nguqulo intsha iyahambelana neekhompyuter ezifanayo njenge-macOS Big Sur.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 15 » Yintoni entsha kwi-iOS 15.1
I-Apple Fitness + kunye ne-Apple One Premiere iyafumaneka ukuqala kwiveki ezayo